Fandrarana fanapahana hazo: Halevina amin’ny inona ny razana ?
samedi, 09 mars 2019 22:35
Manomboka miakatra ny feo avy amin’ny lafivalon’ny Nosy manoloana ny fandrarana ny fikapana, fitaterana ary fanondranana hazo sarobidy araka ny Naoty navoakan’ny ministeran’ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy tamin’ny 29 janoary 2019.
Hatramin’ireo ravin-kazo sy zava-maniry any anaty ala sy eny an-tanimbary, sy ireo fanaka vita amin’ny hazo aza dia voarara tsy mahazo mivezivezy raha tsy izany hogiazana avy hatrany.
Dia halevina amin’ny inona izany ny razana raha tojo fahoriana aty aminay, hoy ny mponina aty atsimo, satria ny vatapaty aty aminay dia amboarina amin’ny hazo mafy avokoa, hoy izy ireo: na amboarina amin'ny manary na mendoravy na voamboana (palissandre). Ireo hazo ireo anefa dia azo lazaina fa hazo masina aty atsimo satria ireo no andevenana, izao anefa sakanana.
Any Antananarivo raha misy fahoriana dia saika efa manana vatapaty ny Fiangonana hitondrana ny razana hatrany amin’ny fasan-drazana fa aty atsimo tsy toy izany, ka izay no mampametra-panontaniana hoe : hatramin’ny oviana no manankery io Naoty navoakan’ny ministera io satria Foko maro no sahirana manoloana io, amin'ny fanajany ny fomban-drazany.
(Sary nomena - St Augustin: Saron'ny vata-paty, izay bataina mitokana satria mavesatra loatra)